FILOHA HERY RAJAONARIMAMPIANINA: “Fanitsiana no atao fa tsy fanovana lalam-panorenana”. | déliremadagascar
Mpanao gazety avy amin’ny haino aman-jery sy gazety ary mpikirakira aterneto avy eto Antananarivo sy avy any amin’ny faritra manodidina zato no niaraka nitafa tamin’ny Filoham-pirenena Malagasy, Hery RAJAONARIMAMPIANINA ny 16 septambra 2017, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha. Saika voasolo tena avokoa na orinasa an-gazety mpanohana na mpanohitra ny fitondrana nandritra ny fihaonana mivantana tamin’ny Filohan’ny Repoblika ity.
Nomena sehatra malalaka ireo mpanao gazety nametraka ireo fanontaniana manitikitika ny vahoaka. Anisany fanontaniana novalian’ny Filoham-pirenena ny fanovana ny lalam-panorenana. Nambarany fa tsy fanovana no atao fa fanitsiana. Anisany antony hanaovana ny fitsapam-kevi-bahoaka ny fanitsiana ny lalana momba ny fifidianana. Ohatra amin’izany ny andinindin-dalana faha 47 ao amin’ny lalam-panorenana milaza ny fe-potoana hanaovana ny fifidianana Filoham-pirenena mialoha ny fahataperan’ny fotoam- piasan’ny ny amperinasa. Nohamafisin’ny Filoham-pirenena fa tsy ampy ny iray volana hanaovana ny fifidianana satria tokony eritreretina foana ny fiodinana faharoa.
Novalian’ny Filoha Hery RAJAOANARIMAMPIANINA avokoa ny fanontaniana napetrak’ ireo mpanao gazety tonga niara-nisakafo maraina taminy.
One comment on “FILOHA HERY RAJAONARIMAMPIANINA: “Fanitsiana no atao fa tsy fanovana lalam-panorenana”.”
aona no hanatsarana ny lalam panorenana? ny eo ary tsy voahaja … vao nanomboka ny fitondrana ankehitriny dia nandika ny article 54(fametrahana PM), avy eo, article 167(hcj), koa mba manontany tena hoe aona no hanatsarana raha ny eo ary tsy voahaja